I-China i-Full-servo uLawulo oluSebenzayo lokuSebenza kwabaDala abaDala iMveliso kunye noMxhasi | I-PEIXIN
UKhuseleko lwe-Servo egcweleyo-uKhuseleko lweSanki ...
Ulawulo olupheleleyo lweServo eSebenzayo eSebenzayo yaDala abaDala ...
I-Full-servo eSebenzayo ngokuPheleleyo yeNdawo yokuFunda ngeNdlebe uMntwana ...
Imodeli: PX-CNK-300-SF 、 PX-CNK-250-BSF 、 PX-CNK-200-BP
Umsebenzi wesiXhobo kunye neParamitha
1. Inkqubo yokulawula ye-servo epheleleyo ene-automation ephezulu ngelixa umatshini unokuphakanyiswa ngokweemfuno zabathengi.
2. Ngaphantsi koyilo oluqhelekileyo lwaseYurophu, yagqithisa isatifikethi seEC, iinxalenye zombane phantsi kwe-CE okanye ukuqinisekiswa komgangatho we-UL, kunye neyunithi yokhuselo lokhuseleko, njengeminyango yokhuseleko kunye neyokuxakeka njalo njalo.
3. Uninzi lwezinto ezisetyenzisiweyo ziphantsi kolawulo lwamanani ngokuchanekileyo, amacandelo aphambili oomatshini aphantsi kokulungiswa kwe-CNC, amacandelo aphambili aphuma ngawo luphawu lomhlaba oludumileyo.
4. Isinxibelelanisi esisebenzayo kushishino yi-PLC enobuchule bokuyilwa kobuntu kunye nokuqokelelwa kokukhethwa kwengxelo yemveliso.
5. Kuyasebenziseka ukuphakamisa inkqubo yokujonga ikhamera, enokuthi iqhubekeke ukukhangela ubungakanani be-line, indawo yokuhlola, ukungabikho kokuhlola, ukubonwa kokuchaphazeleka kwamabala njalo njalo ..
6. Eminye imisebenzi enokukhethwa inokunyulwa ngabathengi:
a. Jumbo roll auto splicing ulawulo lwe-servo b. Jumbo roll auto splicing isilwanyana esiguqukayo
c. Inkqubo ye-Jumbo roll engazenzekeliyo d. Is stacker yolawulo olupheleleyo (umatshini wokufaka umatshini ngokuzenzekelayo)
e. Umatshini wokutswina ngokuzenzekelayo
Inani lamandla onke (ngaphandle
komfaki sicelo seglue kunye nomatshini oxinzelela
-diaper yabantu abadala oomatshini abazenzelayo: Umyinge
(kubandakanywa inkunkuma ebangelwa ngumceli weglue) : ≤4%
soyilo: Umgca wokuvelisa i-diaper yabantu abadala ogcweleyo: I-300pcs / i-
Semi-servo yokuvelisa umgca wokuvelisa umdiza wabantu abadala: 250pcs / min Umgca wokuvelisa umgca wokubonisa wedrafti
Isantya imveliso zizinze (ngokobungakanani m):
Full-servo ilweyile abadala umgca wemveliso: 200pcs / min
iimilo-servo umgca imveliso ilweyile abadala: 160-180pcs / min
umgca wemveliso Full-oluzenzekelayo ilweyile abadala: 150pcs / min
Ubungakanani ngokubanzi (L × W × H): 35 × 13 × 4.5m
Ubunzima: 100T (Malunga)
Ngaphambili: I- I-Full-servo eSebenza ngokugqibeleleyo umGqibelo weNdawo yokuFakelwa kweDihlekile yeNdlebe (isiTayile)
Okulandelayo: Ulawulo olupheleleyo lweNqanawa ye-Napkin yokuCoca ngokuPheleleyo
Machine For ukucupha
ndakhefuza ilweyile Machine
panty wesampula Production Line , Wet esisula Machine , Daily Ucoceko Machine , uTsalo Up Machine , Mini Pad Production Line , Lady Pad Machine ,